Maitiro Ekutenga Akakodzera Kuramba Mabhendi Eako | Trivoshop
musha nhau Nzira yekutenga Yakakodzera Resistance Bhendi Iwe
Resistance mabhendi akaenzana nemakumi ezviyero, asi iwo akareruka kureruka, compact uye inotakurika Kana iwe uchida kuwana iko kunoshanda kurovedza paunenge uchifamba kwekurwisa bhendi isarudzo yakanaka.
Kunyangwe iwe uri dumbbell munhu uye wanga uchidzivirira kushandisa mabhendi nekuti iwe unotenda kuti haabatsire kana kuti pamwe hauna kana chokwadi chekuita navo ikozvino inguva yakanaka yekuyedza chimwe chakasiyana.
Nei Uchifanira Kuedza Kuramba Bhandi?
Kuvandudza chiyero chako pamwe nekubatana.
Munguva yekushandiswa kwezvikwata, iwe unonzwa kunetsekana uko kunomanikidza iwe kugadzikisa muviri wako. Aya mafambiro anosanganisira akawanda mhasuru mapoka kupfuura akajairwa uremu kudzidziswa kuwedzera yako nhanho yekubatana uye kuenzanisa.
Kudenha muviri wako.
Kazhinji zviyereso zvinogona kuve nemipendero kana zvasvika pakuwanda kwemaekisesaizi iwe aunogona kuita, asi nemabhendi ekudzivirira, unogona kuve unogadzira sezvaunoda. Vanokutendera iwe kuti uchinje chinzvimbo chako munzira dzakasiyana siyana uchishanda kunze mhasuru dzawaisatomboziva kuti dziripo.
Kuti uwedzere hutano hwako.
Rutivi rwakajeka rwezvikwata ndezvekuti ivo vanokodzera kwete kwete chete kune vanotanga asi pamwe nevevane mamwe mapamberi ekurovedza muviri. Iwe unogona kushandisa iyo imwechete bhendi kune ekutanga mafambiro uye kwakasimba kushanda.
Matipi Ekutenga Resistance Bands
Iva nezvinopfuura chimwe chete.
Mazhinji mabhendi ane mavara akasiyana kuti asiyanise tension level. Iwe unogona kusarudza kubva pachiedza, chepakati, chinorema, kana chakawedzera chinorema. Izvo zvakanakisa zvingave kuve nemabhande mune angangoita matatu akasiyana saizi sezvo akasiyana mapoka emhasuru anoda nhanho dzakasiyana dzekurwisa. Vazhinji kurovedza muviri vanosarudza Rep Band Kudzidzira Bhendi sezvo paine nhanho dzakasiyana dzavanogona kusarudza kubva.
Mabhendi ari nyore kutakura.
Mamwe mabhendi ane bata, uye ivo vakanakira kurovera maoko. Iyo pasuru inowanzo sanganisira angangoita maviri akasiyana mabhendi uye anochinjika mabato. Kana iwe ukatenga mabhendi ane padded handles, ivo vachatora yakawanda yakawanda nzvimbo muhomwe yako, uye zvichave zvakaoma kuatakura iwo kutenderera.
Kuti utange, sarudza yakakosha refu chubhu ine bata. Paunenge iwe waona mashandisiro aungaishandisa, ungangoda kutenga mamwe mabhendi gare gare kuti siyana.
Imwe bhenefiti huru yekushandisa mabhendi kuve nenzira dzakasiyana dzekuabatanidza. Unogona kuvayambuka, kuzvisunga, kana kushandisa zvishongedzo senge yekunamatira pamusuwo kuti ugadzire akasiyana maekisesaizi. Iwe unogona zvakare kutenga ankle cuffs, akasiyana akabata, uye zvimwe zvishongedzo.
Iwe uchaona kuti kune akasiyana siyana ekudzivirira mabhendi anowanikwa munzvimbo zhinji dzemitambo. Unogona kutenga mabhendi ekumisidzana muchitoro chemuviri, asi kana iwe uchitsvaga zvimwe sarudzo nezvishongedzo uye, dzimwe nguva, mhando iri nani, unogona kuwana uchifanira odha ivo online.
Kudzidziswa nemabhendi ekupikisa kwakanakira munhu wese zvisinei nezera uye nhanho yechiitiko. Kuti uwane zvakanyanyisa kubva pane yako tsika, tenga saizi chaiyo uye mhando yebhendi. Mabhendi anogona kushandiswa pakurapa kwepanyama kana kugadzirisa zvakare, asi tinokurudzira kubvunza nyanzvi yehutano kana chiremba kuti uwane hutungamiri chaihwo.
Yakanyorwa mu: kugwinya, kupikisa mapoka, Yoga
Previous nyaya Kucheka Edge Technology yeIT uye kupfuura
inotevera Iyo Yakanakisisa Fenicha Yako Hofisi Imba